အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျွန်မရဲ့ချစ်သူ အကြောင်း
26 Responses to “ကျွန်မရဲ့ချစ်သူ အကြောင်း”
ခုခေတ်ချိန်ခါမှာ ရှားပါလာတဲ့ မေတ္တာတရားကို ဒီအဖိုးနဲ့အဖွားစုံတွဲကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အားကျအတုယူပြီး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး သက်ဆုံးတိုင်ချစ်ခင် ကြင်နာနေကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ... လောကကြီးလဲ ဘယ်လောက်အေးချမ်းလိုက်မလဲ...။
Is thatatrue story, sis? It touches my heart. Nice translation!
ကံကောင်းလိုက်တဲ့အဖွား မေတ္တာကိုသစ္စာနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကောင်းလိုက်တာ။
ပြည်တော်ပြန်နေလို့ မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီး)
ပြီးတော့ ဝမ်းနည်းနေမိတယ်...း((
ပေးဖတ်စေချင်လိုက်တာ။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့
သစ္စာတရား၊ ခင်ပွန်း အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုတာ ဘာတွေလဲလို့ နားလည် စေချင်လို့ပါ။
သွားပြီ ငါ့သားလေးတော့ ချိန်ပါကြီးဖြစ်ပြီပေါ့ ;P
It hit my heart with great appreciation.So touching.....Whatablessed couple!Thanks for sharing Chaw.It'sarare story nowadays.
အဟီး........ အပြေးအလွှားလာဖတ်ရတာ.. လက်ဖွဲ့အတွက် ငွေစုရတော့မှာလားလို့.... အထင်တကြီးနဲ့.....။ :D :D :D
စတာပါ အစ်မချောရေ.... အားကျ လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ ဖွားဖွားနဲ့ဘိုးဘိုး စုံတွဲပါပဲ။ ရေစက်ကြောင့်နေမှာ။ ဒီလောက်ချစ်နေကြတာ။
ဘိုင်သဝေး ။ လက်ဖွဲ့ဖိုးစုရတော့မယ်ဆိုလည်း ကြိုပြောဗျာ။ ခုလိုတော့ ကမန်းကတန်း တွေ မလုပ်နဲ့ နော်။။။။ ဟဲဟဲ။
ဆိုသလိုပေါ့ .. ;)
ဒီအဖိုးနဲ့အဖွား ရောက်နေတဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ဆို ခေတ်တွေ အများကြီး၊ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ ရမှာပဲ၊ သူတို့လည်း ပြောင်းလဲမယ်ဆို ပြောင်းလဲလို့ ရပေမယ့် ရိုးမြေကျ ချစ်ကြတာ တကယ့်ကို ကြည့်နူးစရာပါပဲ၊ ဖတ်ရတာ ချမ်းမြေ့စရာ ကောင်းတယ်..မချော။
ခုခေတ်ကြီးမှာ ဒီလို အိုအောင်မင်းအောင် သက်ဆုံးတိုင် ရိုးမြေကျ သစ္စာ ရှိရှိ ပေါင်းသင်းနေထိုင် သွားကြတဲ့ အိမ်ထောင်မျိုး အရမ်းရှားပါးနေပြီနော်..
လေးစားဖွယ်ရာ အတုယူဖွယ်ရာ ကောင်းလိုက်တာ..
မချော တယောက်လည်း ဒီလို အိမ်ထောင်ဘက်မျိုး နဲ့ ဖူးစာဆုံပါစေ..လို့..
အတုယူ၊ အားကျ၊ လေးစားဖွယ် ကောင်းလှပါရဲ့နော်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ...
စိတ်က ခပ်နုနုရယ် :D
ချောလဲ အဲဒီအဖွားလိုပဲ... ချစ်ခင် ကြင်နာ ယုယ စောင့်ရှောက်မည့် Gene ကဲ့သို့သော ဘ၀လက်တွဲဖော်နဲ့ သက်ထက်ဆုံးတိုင်အောင်ပဲ....
ချစ်ခင်နားလည်မှုတွေနဲ့ အိုအောင်မင်းအောင်အတူ နေရတယ်ဆိုတာ ထူးတာပေ့ါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
က အဖိုးအဖွားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထိတွေ့လိုက်ရလို့၊
ခေတ်သစ် နကုလမာတာ နဲ့ နကုလပိတာ လို့ပဲ အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရပါတယ်။
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး မချောတစ်ယောက် သူ့ဘ၀အကြောင်း ဖောက်သည်ချပြီထင်နေတာ။း))
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးမိပါတယ်။ ဇနီးမောင်နှံတိုင်း သူတို့လို ချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ချစ်ခင်စွာဖြင့် အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေဆိုတာ ဒီလိုမျိုးထင်ပါတယ်၊
အိုခြင်း နာခြင်းတရားတွေ၊ ကျနော်တို့လည်း ကျော်ဖြတ်ရဦးမှာပဲ။
ကြည်နူးစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပို့စ်လေးပါပဲ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်ညစ်လာတယ်... စိတ်ညစ်လာတယ်ဆိုတာက ဟိုးငယ်ငယ်က လှပစိုပြေနေတဲ့ပုံနဲ့ အသက်ကြီးလာတော့ အိုမင်းရင့်ရော်လာမှုကို ယှဉ်တွဲမြင်မိခြင်း၊ ပြီးတော့ ရောဂါရဲကဒဏ် ဇရာရဲ့ဒဏ်တွေကို ခံနေရင်းနဲ့ ၀မ်းတထွာအတွက် ရုန်းကန်နေရဆဲ... ပင်ပန်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နေမိတယ်... ဘေးနားမှာ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတဲ့အတွက် ကံကောင်းတယ်ဆိုနိုင်ပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အချိန်၊ သေရမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေရမယ့်အချိန်... အဲလောက် အသက်ရှည်ရှည်တော့ မနေချင်ဘူးဗျာ.....
ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်နဲ့ ဘဝဆုံးတိုင် လက်တွဲသွားနိုင်သော အဖိုးအို Gene နဲ့ အဖွားအို Bobby တို့ရဲ့ အတိတ်ကံ အကျိုးပေးက ကြည်နူးစရာ။
အဖိုးနဲ့ အဖွားတို့ 'သေအတူရှင်မကွာ' ဆိုတဲ့ဆုလေးနဲ့ ပြည့်ဝကြတာအားကျစရာနော်။